RIHANNA, ခင်ဗျားရဲ့ HADITH ကိုမင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်အတွက်တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ INSTA ဇာတ်လမ်းထက်ပိုပါတယ် - သတင်း
Rihanna, ခင်ဗျားရဲ့ hadith ကိုမင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်အတွက်တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ Insta ဇာတ်လမ်းထက်ပိုပါတယ်
Savage X Fenty သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ပြပွဲကို Amazon Prime တွင်ပြသခဲ့ပြီးပြသမှု၏အနုပညာအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သတ်သည့်ဖောင်းပွမှုအားလုံးကြားတွင် Rihanna သည်အစ္စလာမ်သာသနာ၏မြင့်မြတ်သောအစ္စလာမ်စာသားကို remix တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ သူမ၏အတွင်းခံဖက်ရှင်ပြပွဲ။ အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသူရဲကောင်း Rihanna တွင်ကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
Rihanna သည်သူမ၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအမျိုးသမီးများအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ LA အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရသူများကိုထောက်ပံ့ရန်ပေါင် ၁.၆၇ သန်း။ သူမသည်လူအများအပြားအတွက်သူမ၏အလုပ်ကျင့် ၀ တ်နှင့်သူမ၏ဂီတလုပ်ငန်းနှင့် Savage X Fenty နှင့် Fenty Beauty တို့၏အောင်မြင်မှုများကြောင့်သူမအတွက်အလွန်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Rihanna ၏အမှားနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာအခြားနည်းများဖြင့်သူမပါ ၀ င်မှုကိုထောက်ခံသည်၊ သို့သော် hadith ၏ပါဝင်မှုသည်ကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုဖြစ်သည်။ Fenty Beauty ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါအခြေခံအုတ်မြစ်၏အသားအရောင်ကွဲပြားမှုသည်စျေးကွက်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ Rihanna သည်မိတ်ကပ်လုပ်ငန်းတွင်ကြီးမားသောခြေလှမ်းများလှမ်းနေခြင်းကအလွန်ကြီးမားသည်။ သူမ၏အထင်ကရအားလုံးပါ ၀ င်သည့်အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအားလုံးပါ ၀ င်သည့်အတွက်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ သည်အခြားရေတွက်တွင်, Rihanna ရဲ့အပြုအမူသူမ၏အမှားဒါစိတ်ပျက်စရာဖြစ်စေသောအရာဖြစ်သောမတူကွဲပြားမှုကိုကျင်းပခြင်းနှင့်ကျင်းပဆီသို့ ဦး တည်ညွှန်ပြ။ Savage X Fenty အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး တည်းကမူဆလင်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအပေါ်အလွန်အမင်းစိတ်နာကြည်းဖွယ်ကောင်းသည်ဟုမည်သို့မှတ်ယူခဲ့သနည်း။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ ecstasy တာ
ဒီ post ကို Instagram ပေါ်မှာကြည့်ပါ
မနက်ဖြန် အောက်တိုဘာ 2nd !!! သင်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ #SAVAGEXFENTYSHOW VOL.2 @AmazonPrimeVideo @SavageXFenty @AmazonFashion #SAVAGENOTSORRY
မျှဝေသည် မင်္ဂလာပါ 10:06 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 1, 2020 ရက်တွင် (@badgalriri)
Doom သီချင်းကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှမွေးဖွားသူ Coucou Chloe မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ မူဆလင်ဘာသာကိုရိုသေလေးစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမှားအယွင်းများဖြစ်ပွားပြီးမကြာခဏအမှားကျူးလွန်မိသည်။ ဒီသီချင်းဟာအငြင်းပွားစရာသဘောသဘာဝရှိပြီးအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့လှောင်ပြောင်မှုတစ်ခုလား၊ သူ့ဟာသူအတွက်သီချင်း၏အမည်, 'Doom', ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မြတ်သောစာသားကိုဒါမလေးစားခံစားရနှင့် Coucou Chloe ရဲ့အနက်ကိုငါတို့ယုံကြည်ခြင်း၏လှောင်ပြောင်ဖြစ်ခြင်းဆီသို့ ဦး တည်ဝေးပိုပြီးကျူလုံးသည်မှီ။ Rihanna ကိုယ်တိုင်သီချင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုနားလည်သည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံကြည်သော်လည်း Coucou Chloe သည်ထိုအဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိနားလည်ပြီး၊ Savage X Fenty အဖွဲ့မှလူအများက၎င်းသည်ပြwouldနာဖြစ်မည်ကိုသတိပြုမိနိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအတွင်းခံဖက်ရှင်ပြပွဲများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်၏ connotations အတွက်ယူမတိုင်မီပင်သီချင်းထည့်သွင်းရန် Rihanna ရဲ့ naivety အနည်းဆုံးပြောပြproblemနာဖြစ်ကြသည်။
#SAVAGENOTSORRY bih! 🤷‍♀️ Vol ။ @savagexfenty ၏ @2သည် @amazonprimevideo တွင်မနက်ဖြန်ပြပါ
မျှဝေသည် မင်္ဂလာပါ 5:12 pm တွင် PDT မှာ, 2020 အောက်တိုဘာ 1 ရက်နေ့တွင် (@badgalriri)
အခြားမွတ်စ်လင်မ်ကျောင်းသားများက Rihanna မှသူမပါ ၀ င်မှု၌ပါ ၀ င်မှုအပေါ်ထားရှိသောဤအပြုအမူသည်သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုထားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမကသူမလှောင်ပြောင်နေသည်ဟုယုံကြည်သည်။ သင်ပြောတာကပညာရေးကိုသင်ယုံကြည်တယ်၊ .. နောက်ထပ်မွတ်စ်လင်မ် Rihanna ပရိသတ်တစ် ဦး ကမူသူသည်ထိုသီချင်းကိုသီချင်းတစ်ပုဒ်အတွက်အသုံးမပြုမီနှစ်ကြိမ်စဉ်းစားသင့်သည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦး squirr အောင်ဘယ်လို
လူအများစုကသူမအားပြပွဲ၌မတူကွဲပြားသောမော်ဒယ်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်သူ့ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုသော်လည်းသူ၏တောင်းပန်မှုသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော် Rihanna ဆီကပိုကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်၊ ထပ်ခါထပ်ခါသူမကကျွန်တော်တို့ကိုပါဝင်နိုင်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားအကြောင်းအရာဆောင်ကြဉ်းရန်အခွင့်အလမ်းများကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့်ဒီကြီးမားတဲ့အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် Rihanna အတွက်ကြီးမားသောအားနည်းချက်ဖြစ်သော်လည်းလူတိုင်းအမှား လုပ်၍ ဒုတိယအခွင့်အရေးရသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သို့သော် Rihanna သူ့ကိုယ်သူပြောသကဲ့သို့, '' ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားကျနော်တို့ဒီအစဉ်အဆက်ကိုနောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်သေချာအောင်ပါလိမ့်မယ်။ ''